FAALLO: Muqdisho Oo Murug Ku Ciidaysa. (SAWIRRO) - FOOLAAD MEDIA
Home » Aragtida Dadweynaha » FAALLO: Muqdisho Oo Murug Ku Ciidaysa. (SAWIRRO)
FAALLO: Muqdisho Oo Murug Ku Ciidaysa. (SAWIRRO)
Muqdisho waa magaalo taariikhi ah oo qarniyo badan jirta. Waa magaalo ay kasoo talin jireen boqortooyooyin islaami ah.
Waligeed waxay caan ku ahayd ganacsi, aqoon iyo ilbaxnimo. Taariikhdeeda waxaa ka buuxa baalal badan oo ifaya kana marqaati kacaya iney lasoo halgantay gumeystayaal badan sida:- Burtoqiiska, Ingiriiska, Mareykanka iyo Xabashida.
Muqdisho, waa magaalo uu mar walbaahi beegsado gumeystaha isagoo ka duulaya qaacidada ah “Mas madaxa ayaa laga dilaa”
Inkastoo uu halgan Jihaadi ah socdo, haddana maanta waxay mareysaa marxaladdii ugu adkeyd ee abid soo marta, waxaan ugu wacan dhowr qodob.
Qodobka 1-aad: Markii hore waxaa kusoo duuli jiray hal dowlad ama labo, lakain maanta waxaa qabsaday dowlado badan oo isku ujeedo iyo kala ujeedo ah.
Dhinac waxaa ka heysta Mareykan iyo reer galbeed kuwaasoo oo deggan Xalane iyo meelo kale, dhan waxaa ka qabsaday Turki, Waxaa ku amr taagleeya ciidamo Afrikaan ah, oo wax kale iska dhaafe, magaalada ka noqday Bolis iyo CID, (dambi baaris).
Qodobka 2-aad: Muqdisho waligeed awood iyo maamul kuma yeelan dad daba dhilifyo ah oo u shaqeeya gumeystaha islamarkaana wata Baasabooradooda, maantana ninka ugu sarreeya dowladda waa muwaadin heysta dhalashada Mareykanka kana soo shaqeeyay dowladda hoose ee Newyork gaar ahaan qeybta nadaafadda. Ra’iisulwasaaruhu wuxuu heystaa dhalashada Norwey, Gudoomiyaha Baarlamaanka wuxuu wataa baasaboor Turki ah, halka gudoomiyaha gobolka Banaadir uu yahay muwaadin Ingiriis ah.
Khibradda kaliya ee uu madaxweynuhu leeyahay, waa in mar Ra’iisulwasaare lagu tijaabiyay, markii la arkay inuusan gumeysiga la jaan qaadi karinna, waa tii Kambaala lagu soo edbiyay oo lagu amray inuu isku casilo magaalada Muqdisho, sidaa darteed ayuu Sh/Abuu Cubeyda Amiirka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, ninkaasi ku tilmaamay inuu yahay mid ku garaadsaday shirkii “Kambala Accord”
Qoladan shisheeyaha ku daaban ayaana qeyb weyn ka ah gumeysiga iyo dhibaatada adag ee ay maanta wajahayaan Muqdisho iyo dadkeeda, xaaladduna waxay mareysaa siduu muddo hore cabiray abwaan Soomaaliyeed.
IYAGOO MASIIXA WAYEY MAALIN SOO NOQONE,
MUQDISHEY KA FOOTEYNAYAAN MAYKAL IYO JOONE.
Qodobka 3-aad: Muqdisho, waxaa mar walba xoreynteeda dadka u horseedi jiray culimada, xataa ayadoo aan gumeysi joogin bey dowladaha calmaaniyiinta iyo kuwa shuuciyadda ka diidi jireen ku tumashada diinta iyagoo naftooda huraya oo fagaarayaasha lagu toogan jiray sidaba ku dhacday culimadii 11-ka ahayd ee kasoo hor jeesatay xad gudubkii uu Siyaad Barre, u geystay Qur’aanka Kariimka. Laakin culimada maanta inuu Allaah, u naxariistay oo halganka wada iyo in taageersan mooyaane, waxay intooda badan noqdeen kuwa gumeystaha u fatwooda oo laga bixiyo kharashaadka Hoteelada iyo kuwa cabsi darteed xaqii u qariyay illaa ay xaaladdoodu gaartay in marka ay tafaasiirta aqrinayaan ay daqiiqado yar uun ku sharaxaan aayaddaha uu Allaah kaga warramay jihaadka (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ …) kuwa lamaanayaashana ay habeeno dhan kala dhig dhigaan ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ…) Labaduna waa kaamka Allaah, sidaa darteed maxay midna uga gaabsanayaan midna si qoto dheer ugu faahfaahinayaan?
Qodobka 4-aad: Mar walboo uu gumeyste kusoo duulo Caasimadda, waxay bulshada Muqdisho ahayd mid ka caafimaad qabta duullaan maskaxeed, balse, waxaa maanta loo sameystay in ka badan 30 idaacaadood oo uu maal galiyo shisheeyaha.
Dowrka war baahinadan ayaana ah, in dadka loo muujiyo sawir ka duwan xaaladda ay ku sugan yihiin, in lagu mashquuliyo kubbad, heeso, sidoo kalana loo xayaysiiyo Gumeystaha, illaa heer ay arrintu gaartay in Tv-yada qaar ay baahiyaan Itoobiyaan dhoollatus sameynaya!
Muqdisho oo murug ku ciideysa.
Dhibaatooyinkaas iyo kuwa kale oo u muuqda ciqaab dheeri ah oo xag Alle, ka yimid oo ka taagan Xamar, ayaa sababay in Bulshadu murug ku ciideysato, marka laga qiyaas qaato sida ay u diyaar garoobayaan.
“DF” ayaa xirtay wadooyin hor leh oo isugu jira Laamiyo iyo jid cadayaal, iyadoo dhigtay dhagxaan waaweyn iyo carra tuuro, waxaana kamid ah kuwa ka baxa wadada Wadnaha ee aada dhanka Maka Al-Mukarama.
Tani waxay saameyn adag ku yeelatay isku socodkii bulshada. Dadka waxaa ku adkaatay iney mootooyinka ku maraan jidadka taasoo ku khasabtay iney cagahooda maalaan.
In badan oo kamid ah wadooyinka waxaa lagu arkayaa hooyooyin caruur badan wata oo iska lugeynaya marna ku nasanaya hareeraha wadooyinka.
Mid kamid ah hooyooyinkii cagahooda maalay ayaa ii sheegtay iney aad uga ciishootay markii ay aragtay gaadiidka ciidamada shisheeye iyo kuwa madaxda iyo sahqaalaha dowladda ee ID-cardyada wata oo wadooyinka iska dhex mushaaxaya iyo sida iyaga looga xarrimay.
Intaa waxa dheer, ciidamada dowladda ee wadooyinka dhooban oo qofkii ay fursad ku helaan ka dhacaya lacagta iyo Telefoonka uu wato, sidoo kalana ku jees jeesaya dadka ay ka muuqato shacaa’irta sida:- haweenka Indha shareerka wata iyo ragga gararka leh.
Arrinta kale ee xusidda mudan ayaa waxay tahay, in wadooyinkii qarda jeexa ahaa intooda badan ay bohollo ka sameeyeen roobabkii dhawaanahanba da’ayay ee illaa iyo hadda socda.
Arrimahan oo la isku daray ayaa ka dhigan in dadka reer Muqdisho, ay ku ciidayaan ciil iyo murug, Waayo iyagoo ku dhibtooday iibsiga adeegyada ciidda ayaa waxaa haddana hor yaalla ineysan maalintaasi farxadda ah is booqan karin eheladda iyo asxaabta, marba haddii wadooyinkii la mari lahaa intooda badan ay xiran yihiin.
Saxaafadda caalamka, marka ay qiimeeneyso sida ay u ciidaan bulshooyinka caasimadaha, waxay ka eegaan halka ay dadka intooda badan ku tukadaan oo ku kulmaan, bilicda wadooyinka iyo ciyaaro dhaqameedka. Balse ciidda bulshada Muqdisho ayaa waxay noqotay mid sannadihii ugu dambeeyay laga qiimeeyo Masjid ku dhex yaalla madaxtooyada ama ku dhow oo ay ciidamo shisheeye ku hareereysan yihiin islamarkaana uu ka khudbeynayo nin Shaarub weyn leh, oo garkii iska xiiray, kaasoo sheegaya inuu horumar iyo barwaaqo gaarsiiyay bulshada uu wadooyinka ku ciqaabay, murugeysan ee uurka ka ooyeysa!
A Somali policeman stands guard along a road which was blocked to control motor vehicle traffic, during a security lock down in Somalia’s capital Mogadishu, February 7, 2017. REUTERS/Feisal Omar